Waqtiga Ganacsi: Ha u horseedo jadwalka ballantaada xigta! | Martech Zone
Sabtida, Maarso 9, 2013 Sabtida, Maarso 9, 2013 Douglas Karr
Weli waan ka xumahay liqitaanka Blackberry Tungle ka dibna la dilo. Waxay ahayd qalab cajiib ah oo aanan awoodin inaan badalo to ilaa iyo hada. Waxaan ku dhacay goob la isticmaalayo Waqtiga 'TimeTrade' ee Riix Jadwalka muujinta oo soo saaray tiknoolajiyad mudan in lala wadaago.
Maalgashiga yar ee aan sameynayo Waqtiga Ganacsi waa u qalantaa sababtoo ah waxay baabi'ineysaa wadahadalka gadaal iyo gadaal ee macaamiishayda ama rajooyinka ku saabsan aqoonsiga taariikhda iyo waqtiga la kulmayo. Nidaamku wuxuu qaataa shaqeyntaas wuxuuna ku xoojiyaa xirmadiisa koowaad, in kasta oo uu kuu oggolaanayo inaad dhigto Dhagsii Jadwalka badhanka si toos ah ugu qor boggaaga! Tani waa muuqaal aad u wanaagsan oo kordhin kara beddelaadyada sida TimeTrade hoos ku xusan:
Filashooyinka ku lug leh jadwal jadwalka wicitaan kooban oo ku saabsan macluumaadka ama caawinta iibka ayaa ka aqoon iyo diyaar badan inay yeeshaan wada hadal iibsasho. Tani waxay gaabinaysaa wareegga iibka iyada oo laga boodayo "sare" ee qashinka iibka isla markaana ay xaq u leeyihiin inay la shaqeeyaan habka iibinta. Macaamiisha TimeTrade waxay si joogto ah u arkaan kororka 25% ama ka badan iibinta-iibinta oo gaabinaysa wareegyada iibka 40% ama ka badan.
Marka rajo ayaa ku soo dhaceysa boggaaga oo aad xiiseyneysaa. Halkii ay soo gudbin lahaayeen foom codsi ah, waxay gujinayaan inay jadwal sameeyaan oo ay jadwal u sameeyaan ballanta taas oo si habboon loo marinayo qofka saxda ah ee kooxdaada. Sidee qabow waa taas? Wax buuq la'aan, maahan muss… jadwalkaaga ayaa la cusbooneysiiyay, iibintaada CRM waa la cusbooneysiiyay, iyo ololaha kobcinta otomaatigaaga suuqgeynta ayaa hadda la bilaabay. Waxaas oo dhan waxaa lagu gaaraa iyada oo aan cidna shirkaddaada far ka qaadin!
TimeTrade wuxuu si toos ah ula midoobayaa Kalandarka Google, Hubspot, Marketo, Eloqua iyo Salesforce. Markaa kaliya maahan hogaamintaada inay dejiyaan ballanta, laakiin macluumaadkooda ku jira CRM-gaaga ama suuq-geynta suuqgeynta ayaa sidoo kale la cusbooneysiin doonaa!
Tags: dhagsii jadwalkajadwalka
Waan jeclahay waqtiga ganacsiga, shaqo fiican.
Hey Doug, waad ku mahadsan tahay dib u eegista cajiibka ah. Noo soo sheeg haddii adiga ama qofna aad wax su'aalo ah ka qabtid TimeTrade!
Oktoobar 8, 2014 at 6:41 AM
Waqtiga Ganacsi wuxuu leeyahay cilado aad u daran badeecad ahaan iyo shirkad ahaanba. Sababta ugu weyn ee dadku u rabaan shey sidan oo kale ah waa iswaafajin – si macaamiisha ay u aadi karaan webka, u ballami karaan ballamaha, waana intaas. Nidaam buuxa oo buuxa ma jiro, hase yeeshe, ugu yaraan Calendar.app. Kama tirtiri karo ballamaha Kalandarka oo ha iga tirtiro TimeTrade. Waa inaan tago SITE-TIMETRADE si aan u maareeyo jadwalkayga. Waxaan tilmaamay in tani aysan ahayn "sync" - in "sync" macnaheedu yahay "sync" laakiin wax taageero ah ma helin. Markii aan weydiistay lacag celin qayb ahaan maadaama tani ay ahayd muuqaal la xayaysiiyay, waxaa la ii sheegay in heshiisku uusan oggolaanayn soo celinta. Shirkad noocee ah ayaa siisa jawaabaha macaamiisha sidan oo kale ah? Waxaan ka tagi doonaa TimeTrade markey sanadkeygu dhammaadaan. Ha iibsan sheygan.
Nov 24, 2014 saacadu markay tahay 9:57 PM
Qalabkani waa wax badan oo ka mid ah wax faa iido leh laakiin waxtar leh isla markaana isla markaa waxtar leh. Waqtiga ganacsiga ayaa shaqo fiican ka qabtay soo saarista waxyaabahan qabow. Walwal kama qabno jadwalka ballanta. Khadkani wuxuu dhahayaa dhamaantiis, "Markaa kaliya maahan hogaamiyaashaada inay dejiyaan ballanta, laakiin macluumaadkooda kujira CRM-gaaga ama qalabaynta suuqgeynta suuqgeynta sidoo kale waa la cusboonaysiin doonaa!".